Kooxda Chelsea oo indhaha ku haysa saxiixa xiddiga Emanuel Vignato – Gool FM
Real Madrid vs Barcelona & Xaqiiqooyin ku saabsan Kulanka El Clasico oo laga yaabo inaadan waligaa maqlin!
Barcelona iyo Paris Saint-Germain oo hoggaaminaya raacdada loogu jiro xiddig ka tirsan Kooxda Chelsea
Waa kee saxiixa bartilmaameedka koowaad u ah suuqa xagaagan Kooxda Manchester United?
Virgil van Dijk oo doortay SHANTA ciyaartoy ee ugu fiican horyaalka Premier League
Gary Neville oo si kulul u weeraray mas’uuliyiinta sarsare ee horyaalka Premier League
Halyeeyga kubadda cagta Brazil ee Zico oo shaaca ka qaaday taladii dahabiga aheyd uu u jeediyay Neymar Jr
Xavi kaliya maahan… xiddig hore ee kooxda Barcelona ah oo ku riyoonaya inuu macalin u noqdo Barca
Kooxda Chelsea oo indhaha ku haysa saxiixa xiddiga Emanuel Vignato
(London) 15 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa la soo warinayaa inay xiisaynayso saxiixa Weeraryahanka naadiga Chievo ee Emanuel Vignato.
19-sano jirkaan ayaa soo maray nidaamka dhallinyarada ee kooxda Chievo, wuxuuna u saftay 21 kulan kooxda koowaad ee dalka Talyaaniga oo ay ku jiraan todobo ka mid ah Serie B bilowga xilli ciyaareedkan 2019-20.
Si uu warinayo Warsidaha Gazzetta dello Sport, Chelsea ayaa rag u soo daawada u dirsatay Vignato xilli ciyaareedkan, iyadoo Blues ayaa ka fiirsanayso inay u dhaqaaqdo soo xero-gelinta da’yarkan marka xayiraaddooda suuqa kala iibsiga la soo gabagabeeyo.
Wararku waxa ay sheegayaan in kooxaha Bayern Munich, AC Milan iyo Inter Milan ay sidoo kale xiisaynayaan gooldhaliyahan, kaasoo u saftay xulka qaranka Talyaaniga ee xiddigaha da’doodu ka hooseyso 20-ka sano.
Vignato ayaa inta badan ka ciyaara garabka midi gee weerarka, laakiin xilli ciyaareedkan waxa uu inta badan kooxda I Gialloblu kaga ciyaaray booska weerarka dhexe ee tooska ah.
Chelsea ayaa hadda laga mamnuucay inay keensato ciyaartoy cusub kaddib markii ay jabisay qawaaniinta FIFA ee ku aaddan la soo saxiixashada ciyaartooyda da’da yar, laakiin Blues ayaa lagu soo waramayaa inay ku rajo weyn tahay in ganaaxa laga dhimayo kaddib racfaankii ay qaateen.
Wax ka ogow sababta Ivan Rakitic ku kaliftay inuu shalay ka soo lugeeyo garoonka diyaaradaha Magaalada Barcelona
Miyuu Anthony Martial dib ugu soo laaban doonaa Man United kulanka Axadda ee Liverpool?